Shiinaha BOPP BAG HC-07 soo-saareyaasha iyo alaab-qeybiyeyaasha | Hengrong
Midabka: caddaan, casaan, madow, midab kasta sida baahidaada.
Faylka midabka: max 2S/8C
Tidib: 9 × 9, 10 × 10, 12 × 12 sida looga baahan yahay
Miisaanka Fabric: ka 70gsm in 150gsm
Bacda suufka ah ee PP
Waxyaabaha: 100% walxo bikrad ah PP
Dhererka: laga bilaabo 30cm ilaa 100cm
Length: sida looga baahan yahay
Sare: goynta mowjadda, dillaac, hirarka ultrasonic,
Hoosta: hal laab/ hal ama laba tolid, laab laab/ tolliin keliya
Denier: 700D ilaa 1000D
Miisaanka Fabric: ka 45gsm in 150gsm
Biyo -xireen: dahaarka ama PE -ga ku jira
Isticmaalka: ciid, sonkor, cuntada badda, bacriminta, sibidhka, iwm.
Tilmaam: UV-daaweeyey biyo-caddayn, dillaac-caddayn, boodh-caddayn
Faa'iidada: qiimaha tartan, tayo sare leh, ku habboon xirxirida alaabta
100% bikrad ah PP
Cadaan, casaan, buluug huruud ah oo cagaaran oo madhan ama sida Midabka La -habeeyey
Kulaylka Goynta, goynta qabow, mowjadda la gooyo ama la gooyo
a. Isku laablaab iyo hal tolay
b. Laba laab laab iyo hal tolay
c. Laab laablaab iyo tolmo labanlaab ah
Boorsada loo yaqaan 'polypropylene PP PP'
9 × 9,10 × 10,12 × 12 sida looga baahan yahay
UV ayaa la daweeyey, biyo-ma-celiso, dillaac-la'aan, boor-caddeyn
1. Bacaha Daboolida & Baakadaha: Max. 5 midab
2. Boorsooyinka filimka BOPP: Max. 10 midab
Wax ka Qabashada Dhulka
Siibid-diid ama cad ama dahaarka/dahaarka leh
Baakadaha bariiska, burka, qamadiga, badarka, quudinta, bacriminta, walnut, baradhada, sonkorta, yicibta, ciidda, sibidhka, miraha, iwm
Qiimaha tartanka, tayo sare leh, sahlanaanta xirmooyinka alaabta
Daabacaadda midabka (BOPP) bacda loo yaqaan 'bag snake', alaabta ceeriin guud ahaan waa polyetylen, polypropylene iyo walxo kale oo caag ah oo kiimiko ah, waa nooc caag ah, oo aan sun ahayn oo aan dhadhan lahayn, waxyeelada jidhka bini'aadamka guud ahaan yar, inkasta oo lagu sameeyay caagag kiimiko ah oo kala duwan, laakiin ilaalinteeda deegaanku waa mid xooggan, soo -kabashaduna waa weyn tahay. Jawiga warshadaha ee casriga ah, warshadaha kala duwan ayaa gobol ahaan u jira, sidaa darteed gaadiidka fog -fog wuxuu noqday ifafaale caadi ah, soo -saareyaashu sidoo kale waxay u baahan yihiin agab baakadeysan sida bacaha -xidhka si loo hubiyo in badeecaddu aysan waxyeello u geysan geedi socodka gaadiidka, si loo bixiyo tayada iibka alaabada ugu fiican .
1, daabacaadda midabka walxaha bac -xidhka waa polypropylene PP.
2. Waxaa inta badan laga isticmaalaa bariiska, quudinta, bacriminta iyo warshadaha kale.
3, Tilmaamaha: 30cm-75cm ballaaran, waa la laabi karaa M gees, dherer aan xad lahayn, daabacaad midab, laminating ama daabacaad caadi ah.
4, waxqabadka iyo faa'iidooyinka: leh astaamaha xoogga sare, iska caabbinta biyaha wanaagsan, muuqaalka quruxda badan.
5, halabuurka alaabta ceyriinka ah: polypropylene PP, filimka daabacaadda midabka OPP, filimka aluminium iyo agab kale.
Waa maxay faa'iidooyinka boorsooyinkayaga suufka ah ee caadiga ah?
Ugu horreyn, marka laga eego dhinaca wax -soo -saarka, sida farsamadan wax -soo -saarka qaangaarka ah, dadku waxay ka heli doonaan inay aad iyo aad u sii kordhayso teknolojiyadda wax -soo -saarka, iyadoo la adeegsanayo farsamada wax -soo -saarka iyo soo -saarka alaabta ceyriinka ah sidoo kale waa mid aad u fudud, qiimaha wax -soo -saarka ku habboonaanta badeecadda oo dhan waxay heshay xakameyn aad u wanaagsan, sidoo kale ha u oggolaato badeecadan noocan ah ka dib markay gasho suuqa iibka inay leedahay qiimo aad u hooseeya, Tani waxay wanaajineysaa waxqabadka qiimaha baakadaha alaabada, oo ah mid ka mid ah faa'iidooyinka bacaha dhogorta leh.
Marka labaad, marka laga eego aragtida adeegsiga, iyada oo aan loo eegin nooca bacaha suufka ah ee dunta ah ee aan adeegsanno hadda, maaddada gaarka ah sida, miisaanka baakadka laftiisu waa mid fudud, ku habboon baakadaha alaabada badan, isla markaa, sida Baakadaha ayaa sidoo kale dib loo warshadeyn karaa. Baakadaha badeecadaha badankooda aan aragno hadda waxay kaloo leeyihiin cimri dherer wanaagsan mana fududa in waxyeello la gaarsiiyo. Sidan, lumitaanka ka dhashay habka isticmaalka ayaa la dhimi doonaa.
Hore: BOPP BAG HC-06
22 Lbs Cuntada Xayawaanka Bopp
50kg jawaan -xidhkii
Pp -xidhkii Bag
Pp -xidhkii Bag Bag
Sanduuqyada Xidhmada leh ee Pp
Bacda tolmoon ee hufan
boorsada buluugga ah ee WB-23
Gawaarida Polypropylene 25kg 50kg wov PP ...
Bacda dahaarka leh ee dahaarka leh ee budada kiimikada W ...
Xidhmada Cuntada kulul ee Fasalka 25kg 50kg PP -xidhka
Bacda tollan ee cas ee galleyda bariiska iyo hadhuudhka W ...